Home News Madaxweynaha jubaland oo ka codsaday dalka Kenya in dib loo furo Xadka...
Madaxweynaha jubaland oo ka codsaday dalka Kenya in dib loo furo Xadka Kenya iyo Somaliya ay wadaagaan
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo xiray shir lagaga hadlayay sidii la isaga kaashan lahaa dabar goynta xanuunada faafa ee degaanada xuduudka ay wadaagan Kenya iyo Soomaaliya.
Shirkan oo maalmahan ka socday magaalada Kismaayo ayaa lagaga hadlayay sidii wasaaradaha caafimaadka Jubbaland iyo Kenya ay isaga kaashan lahaayeen badqabka dadka ku nool degaanada xuduudka iyadoo mashruucan uu hoostagayo Dowlad Goboleedyada Kenya ee xuduudka la leh Jubbaland waxaana kor ka maamulaya wasaaradaha caafimaadka Jubbaland iyo Kenya.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in ay muhiim tahay sidii la is kaga kaashanlahaa dhinacyada nabadgalyada caafimaadka iyo xiriirka ee bulshooyinka ku nool soohdinta labada dal, dhamaan Hay’adaha mashruucan fulinaya ayuu bogaadiyay isagoo sheegay in ay tahay shaqo wakhtigeedi kusoo aaday.
Axmed Madoobe waxaa kale oo uu mahadcelin balaaran u jeediyay Dowlada Kenya oo garab istaagtay dadka gobolka si gaar ah wuxuu amaanay Ciidamada qaybta ka ah AMISOM ee KDF sidii naf hurka ahayd ee ay ugu soo gurmadeen dadka Soomaaliyeed ugana dulqaadeen Al Shabaab meelo badan inta dhimana uu rajaynayo in ay xorayntooda diyaar u yihiin.
Bulshooyinka xuduudka ku nool ayuu sheegay in dano badan ay ka dhexeeyaan, sidaasi darteed dowladda Kenya ayuu ka codsaday in ay dib u furto waqti dhow xuduudka si noloshu ay u noqoto mid isku xiran dadkuna ay dhaq dhaqaaq u samayn karaan.
Previous articleWasaaradda waxbarashada XFS oo la soo wareegtay 24 iskuul oo ku yaalla gobolka Banaadir “Sawirro”
Next articleMidowga Yurub oo ku dhawaaqay Taageeradii ugu horeysa ee Miisaaniyadeed ee Dowlada Federaalka Soomaaliya
5-Xisbi siyaasadeed oo warsaxaafadeed deg-deg ah soo saaray (Aqriso)
Deg Deg. Cadaado oo qarka u saaran in uu dagaal sokeeye...